यसरी धुवा र खरानी बनेर अस्ताए कन्चन तिमिल्सिना – Khabaarpati
यसरी धुवा र खरानी बनेर अस्ताए कन्चन तिमिल्सिना
March 10, 2021 goodmamLeaveaComment on यसरी धुवा र खरानी बनेर अस्ताए कन्चन तिमिल्सिना
काठमाडौ,अ’स्पतालमा दुई महिना भन्दा बढी उपचारको लागि अ’स्पताल बसाई पछि अस्ताएका कञ्चनको मंगलवार अन्त्यष्टि भएको छ । आइतवार नि’धन भएका कञ्चनको शव उनको श्रीमती भनिएकी युवतीको घरमा लगेर आफन्तले राखेका थिए ।
अनिशाले कञ्चनको श्रीमती भएर हिन्दु धर्म अनुसार मान्नुपर्ने परम्परा पुरा गर्नुपर्ने माग कञ्चनको परिवारको थियो । सोही माग लिएर उनीहरु यति धेरै दिन देखि अनिशाको घर अगाडी आन्दोलन गर्न पुगेका थिए । तर कञ्चनको शव धेरै दिन बाहिर राख्दा विग्रन थालेपछि प्रहरीको रोहवरमा भएको सहमति अनुसार शव उठाइएको हो ।
मंगलवार देवघाटमा कञ्चनको अन्त्यष्टि गर्ने सहमति अनुशार अनिशाको घरवाट शव उठाइएको हो । लामो समयसम्म छोराको उपचारको लागि अस्पतालमा बसेकी आमा निधन पछि एक्लिएकी छन् । श्रीमानको सहयोग बिना एक्लै हुर्काएकी छोराको पनि साथ छुटेपछि कञ्चनको आमा एक्लिएकी हुन् ।
उनको बेहाल भएको छ । ६६ दिनको लामो बेहोसी जिन्दगीपछि कञ्चनले आइतबार अन्तिम सास फेरे । अस्पतालको आइसियुमा बोल्न र हेर्न नसक्ने अवस्थाका कञ्चनले बि ष पि ए का थिए । उनले अनिशा कुमालसँग प्रेम विावह गरेका थिए तर लगत्तै माइती पक्षको फरक ब्यवहारपछि उनले यस्तो कदम उठाएका थिए ।
कालिका न’गरपालिका–६ खोलेसिमल गुराउचौरमा प्रेम सम्बन्धमा रहेका कञ्चनलाई अनिशाको परिवारले अलग गराइ दिएको थियो । उपचारका क्रममा ६६ दिनपछि उनै २१ वर्षीय कञ्चनको भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । कञ्चनको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले १७ वर्षीया अनिशाको घर घेरेका हुन् ।
कन्चनको नि’ध’नपछि अनिशाले के गरिन् यस्तो गाउलेले गर्नु गरेपछि सहन सकिनन् अनिशाले (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौंमा बिहानै भूकम्पको धक्का महशुस
चालकदलसहित ७७ यात्रुको ज्यान बचाएपछि शेर्पा बने ‘रियल हिरो’ September 27, 2021
पारस शाहको बाइककमा बसेर मध्यराति ठमेल घुम्ने सुन्दरी युवती को हुन् ? (भिडियो) September 27, 2021
के थियो क्याप्टेन एजी शेर्पाले गरेको खराब समयमा सहि निर्णय ? September 27, 2021
बुद्धएयरको अवतरण गर्न नसकेको विमानमा सवार रहेका पुष्करले भने, बुढी आमा सम्झेर प्लेनमा भक्कानिए (भिडियो सहित) September 27, 2021
हरेक नेपालीले हेर्न खोजेको बिष्णु माझीको गो’प्य भिडियो, स्टुडियोमा यसरी गित रेकर्डिङ्ग हुन्छ (हेर्नुस् भिडियो) September 27, 2021